Niteraka fanoherana ny foaran’ny fitaovam-piadiana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Miezaka manangana indostirian'ny fiarovana ny firenena
Voadika ny 29 Novambra 2019 14:27 GMT
Mpikatroka manohitra ny foara lehibe iraisampirenena momba ny fitaovam-piadiana ao Chiba tamin'ny 18 Novambra. Sora-baventy iray mivaky hoe “tsy ilainay ny varotra fampisehoana fitaovam-piadiana” (武器見本市いらない). Pikantsary avy amin'ilay vilaogera YouTube U PLAN.
Nomanin'ny governemanta japoney tao amin'ny foibem-pivoriana Makuhari Messe ao Chiba, ao anatin'ny ezaky ny governemanta japoney hanangana ny indostirian'ny fiarovana ao amin'ny firenena ny foaran'ny fitaovam-piadiana Defence and Security Equipment International (DSEI na ny Fampitaovana Iraisampirenena momba ny Fiarovana sy ny Fandriampahalemana) dimy taona taorian'ny nanesorany ny fandraràna fanondranana fitaovam-piadiana. Notontosaina tamin'ny 18 ka hatramin'ny 20 novambra izao lanonana izao, herinandro monja mialoha ny fitsidihan'ny Papa Fransoà an'i Nagasaki hitondra hafatra fandriampahalemana ho an'i Japana.
Raha mpitranga ao Japana ny foaran'ny fitaovam-piadiana fa amin'ny endrika kelikely, dia ity no voalohany niarahan'ny governemanta sy ny indostiria nanomana. Araka ny Mainichi Shimbun:
Notohanan'ny ATLA (ny Japanese Acquisition, Technology and Logistics Agency na ny Sampan-draharahan'ny fampitaovana, ny fahazoana ary ny teknolojia), ny minisiteran'ny fiarovana, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny, sy ny minisiteran'ny toekarena, ny varotra sy ny Indostria miaraka amin'ireo orinasa Japoney miisa 62 sy orinasa vahiny miisa 93 ary fikambanana maro nandray anjara ny “lanonana voalohany mampiditra feno ny fiarovana” nataon'ny firenena.
Araka ny filazan'ny filazana fohy nataon'ny DSEI momba ny hetsika, nahasarika mpanatrika 110 avy amin'ny orinasa 60 misolo-tena ireo mpanao fifanekena voalohany Japoney sy Eoropeana ary ireo mpamatsy tahaka ny Mitsubishi Heavy Industries, NEC, Subaru, Thales Japan, Fujitsu, sy ny Airbus Helicopters Japan ny foara..
Taorian'ny fiafaran'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1945, noferan'i Japana ny fanondranana fitaovam-piadiana. Tamin'ny taona 2014, raha jerena ny vaovao farany ny taona 2013 tao amin'ny Paikady Fiarovam-pirenena, nohalefahan'i Japana ireo famerana ireo, milaza fa ilaina ny fampidirana fiarovana ambony miaraka amin'i Etazonia sy ny faniriana hisian'ny fampisiana karazam-[pampidiram-bola maro amin'ny] toekarena.
Nisy ny fanovana tao amin'ny Paikady Fiarovam-pirenena noho ny ezaka mahomby nataon'ny fitondran'i Shinzo hanavao ny Lalampanorenan'i Japana mpitandro Fandriampahalemana mba ho mora amin'i Japana ny handeha hiady.
Maruyama Shinichi, mpanao politika ao amin'ny Antoko Komonista Japana avy ao Chiba nanamarika hoe:
Araka ny notaterina tao amin'ny Saina Mena [gazety ofisialin'ny Antoko Komonista Japoney], tao amin'ny boky torolalana ofisialy ho an'ny fampiratiana fitaovam-piadiana, hoy ny voalaza, “Nahatonga ny indostrian'ny fiarovana hihitatra any ampitan-dranomasina ny fanitsiana vao haingana ny Lalàmpanorenana Japoney”, “ity no fotoana tsara indrindra hanaovana fampiratiana ara-piarovana feno ao Japana”, ary “dingana ho an'i Japana hidirana ao amin'ny tsena Aziatika izany.”
Tsy tokony ampiasaina amin'izany ny foto-drafitrasam-bahoaka [ny foibe fifanekena Makuhari Messe ao Chiba].
(Avy amin'ny lahatsoratry ny Saina Mena momba ny fanitsiana ny lalàmpanorenana ao Japana ny pikantsary)
Hatramin'izao dia nifantoka tanteraka tamin'ny fandraisana anjara sy ny teknolojia amin'ny tetikasa balafomanga anti-balistika tarihin'i Etazonia sy ny fivarotana ny voromby mpanaramaso ny ranomasina sy ny sambo mpanaramaso ny morondranomasina ny fanondranana fitaovam-piadiana Japoney. Na izany aza, tsy nahomby ny firenena nanomboka ny taona 2014 tamin'ny fivarotana ny fitaovam-piadiany noho ny tsy fananana traikefa sy ny hakelin'ny indostrian'ny fanondranana fitaovam-piadiana raha oharina amin'ireo firenena hafa (manana indostria lehibe momba ny fitaovam-piadiana anatiny miompana manokana amin'ny famatsiana filàna manokana ho an'ireo Tafika Fiarovan-tena Japoney i Japana).
Na izany aza, na dia niady mba hanangana indostria mpanondrana fitaovam-piadiana aza ny governemanta, efa ela ireo vondron'orinasa goavana Japoney no nampiasa vola tamin'ny famokarana fitaovam-piadiana ivelan'i Japana.
Tamin'ny volana Novambra, satria nanomboka ny varotra fampisehoana fitaovam-piadiana DSEI, nipoitra tamin'ny media sosialy ny tantara 2017 avy amin'ny gazety mpanaitaitra SPA!. Nitatitra izany fa mampiasa vola amin'ny fanaovana bala miparitaka ireo andry ara-bola Japoney, na dia nanamafy indray ny fahavononany hanaja ny Dina momba ny bala miparitaka aza i Japana, ary na dia eo aza ny fampanantenana tamin'ny taona 2017 nataon'ireo vondron'orinasa Japoney hijanona tsy hampiasa vola [intsony] amin'ny famokarana fitaovam-piadiana tahaka izany.
Ny bala Cluster [miparitaka] dia karazana sombina fitaovam-piadiana natao indrindra hikendrena olona manokana. Vakian'ny rivotra manerana ny tanety ny potipoti-baomba, izay mahatonga azy ireo ho sarotra sitranina sy fehezina rehefa tapitra ny ady. Tsy mifidy fa manao ho lasibatra ny tsy mpiady ihany koa. Ohatra, sivily ny 80 isanjato mihoatra amin'ny voina nateraky ny bala miparitaka tamin'ny ady an-trano tao Yemen.
Manoratra naoty ny tantara tamin'ny taona 2017 ny SPA! hoe:
Raràn'ny andrim-panjakana ara-bola Japoney ny fampiasam-bola mivantana amin'ny famokarana baomba miparitaka. Na izany aza,nilaza ireo FTMF tahaka ny PAX fa tsy voaràra ny fampiasam-bola amin'ny orinasa mpanamboatra izany. Amin'ny fiteny hafa, dia tsy mampiasa vola amin'ny “fanamboarana baomba miparitaka” izy fa mampiasa vola amin'ny “orinasa mpanamboatra baomba miparitaka”
Notsongain'ny tantaran'ny SPA! ny tatitra iray nivoaka tamin'ny Jolay 2017 nataon'ny PAX, FTMF iray miorina any Holandy, izay nilaza fa, tamin'ny taona 2017, ny banky fampiasam-bola japoney Mitsubishi UFJ no “fahafito manerantany eto ambonin'ny tany eo amin'ny resaka fivezivezen'ny vola amin'ireo orinasa mpanamboatra baomba miparitaka, fahatelo eo amin'ny resaka ara-bola, ary fahadimy eo amin'ny fampiasam-bola sy fanaovana ny raharahan'ny banky”. Ny fanavaozam-baovao avy ao amin'ny PAX tamin'ny desambra 2018 no nanoratra naoty fa na dia nampanatena aza ny Mitsubishi UFJ hiala amin'ny fampiasam-bola amin'ny fanaovana bala miparitaka, tsy mazava hoe manao tahaka izany daholo ve ireo orinasa mivoaka avy ao aminy.
Noho ny tsy fananan'i Japana indostrian'ny fanondranana ara-piarovana sy ny fahavononany hivarotra rindrambainga momba ny fiarovana, dia sahiran-tsaina ihany koa ireo mpitsikera sasany ny seho ara-barotra DSEI manoloana ny hevitra manontolo amin'ny foaran'ny fitaovam-piadiana. Niditra Twitter i Sugihara Koji, mpanao politika ao amin'ny Antoko Maintso ao Japana, nilaza hoe:
Nandritra ny foaran'ny fitaovam-piadiana DSEI, nanana tanky Type-10 sy fiara mifono vy madinika Type-16 naranty ny minisiteran'ny Fiarovana Japoney. Nisy ny drafitra teo aloha hivarotra ireo fiara miaramila ireo tany Tiorka, saingy voalaza fa nandà i Japana (tamin'ny farany), satria nampiasaina ho an'ny fanatontosana ady fananiham-bohitra ireo tanky sy fiara. Koa hita fa ho sarotra ho an'i Japana ny hanondrana ity rindrambainga ity .
Inona no hevitr'ity foaran'ny fitaovam-piadiana ity, manontany tena aho?
Na tsy noraharahian'ny manampahefam-panjakana Japoney na tsy nahafantatra izany fanoherana izany izy ireo. Na eo aza ny fanakianana sy ny tahotra fa hihemotra amin'ny lasany mpandala fandriampahalemana i Japana, dia naneho lesona iray notsongaina tamin'ny foaran'ny fitaovam-piadiana lehibe tao Japana i , Kono Taro, Minisitry ny Fiarovana ao Japana, fa mila trano heva misongadina kokoa ny firenena.
Nandritra ny Fampirantiana Fiarovana Ankapobeny DSEI JAPAN. Talohan'ny niresahana ny fahaizana ara-teknolojia, nisy tsy fitoviana lehibe teo amin'ny fampahafantarana nataon'ireo orinasa vahiny sy ny orinasa Japoney. Izany ny ilain'i Japana hiasana voalohany.